Eliza February Promotions!!!🎉🎉🎉 - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
February 5, 2020 | by Eliza Skin Republic
အကောင်းမွန်ဆုံး ဝန်ဆောင်မှု အသက်သာဆုံး ဈေးနှုန်းတွေ နဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ELIZA မှာ Facial Treatment ပုံမှန်လုပ်ရင်း အသားအရေလှပဖို့အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံကြစို့နော်။
1 February 2020 ကနေ 29 February 2020 အထိ February လတစ်လလုံး Eliza မှာရှိနေမယ့် Promotion တွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ ကြည့်လို့ရအောင် ပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
▪️iPhone 11 Lucky Draw Promotion
▪️ Birthday Month Promotion
▪️Check in & Get 10% OFF Promotion
Promotion တွေရဲ့ အသေးစိတ်လေးတွေကတော့ ….
▪️ iPhone11 Lucky Draw Promotion
၂၅,၀၀၀ ကျပ် ထဲနဲ့ iphone11 ကံထူးကြစို့ 🎉🎉🎉
Eliza ကနေပြီး ချစ်တဲ့ Customers တွေ အတွက် iphone11 မဲဖောက်ပေးပါမယ်နော်။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Eliza ဆိုင်တိုင်းမှာ Facial Treatment ဘဲ လုပ်လုပ် Skincare ဘဲဝယ်ဝယ် ၂၅,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးပြည့်တိုင်း Lucky Draw Coupon တစ်စောင်ထုတ်ယူပြီး ကံစမ်းနိုင်ပါတယ်နော်။
ကံစမ်းမဲကာလကတော့ 1 January 2020 မှ 29 Febuary 2020 အထိဖြစ်ပြီးတော့ Eliza ဆိုင်တိုင်းမှာ တစ်လုံးစီဖောက်ပေးမှာပါ။ ၂၅,၀၀၀ ကျပ်ဖိုးသုံးတိုင်း ကူပွန်တစ်စောင်ရမှာဖြစ်လို့ များများသုံးလေ များများကံထူးဖို့အခွင့်အရေးရလေနော်။ နှစ်သစ်မှာ လှရင်း Iphone ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးရအောင် Eliza Skin Republic ကို လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။
ဝယ်ယူထားတဲ့ Coupon တွေကိုသိမ်းပေးထားပြီး ကံထူးရှင်က ကူပွန်နှင့်အတူ လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ELIZA မှဝန်ထမ်းမျာနှင့် ဝန်ထမ်း မိသားစုများ ဤကံစမ်းမဲကို ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
▪️Birthday Month Promotion
February လအတွင်း မွေးတဲ့ သူတိုင်းက Eliza မှာ ဘာ Treatment လုပ်လုပ် 30% ပေးမှာပါ Treatment 30% discount အပြင် ဘာ Skincare ဘဲ ဝယ်ဝယ် 10% discount ထပ်ရမှာပါ။
Promotion လေးကိုရယူဖို့အတွက် မွေးနေ့ရှင်အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးဘဲဖြစ်ဖြစ် အတူတူ လာခဲ့ပေးရပါမယ်နာ်။ ပြီးရင်တော့ Eliza Skin Republic မှာရောက်နေကြောင်း Public နဲ့ Check In ဝင်ပေးပြီး အတူလာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကို Mention ခေါ်ပေးပါနော်။ မွေးနေ့ရှင်အနေနဲ့ February လမှာ မွေးဖွားကြောင်းအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ (မှတ်ပုံတင်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နဲ့ Passport) စတာတွေထဲကတစ်ခုခုကို Cashier မှာပြပေးပြီး Discount ကိုရယူနိုင်ပါတယ်နော်။
Check in & Get 10% OFF Promotion
Check in Promotion အနေနဲ့ ပုံမှန် Check in ဝင်ရင် 10% OFF လျှော့ပေးတဲ့ Promotion ကတော့ အမြဲရှိပါသေးတယ်နော်။
▪️Promotion တွေကတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တွဲသုံးလို့မရပါဘူးနော်။
Eliza ( Waizayantar )
လိပ်စာ – အမှတ် ၉၇(A)၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ သစ္စာလမ်းနှင့်ပါရမီလမ်းကြား၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Hotlien – 09 447420811, 09 447420815
Eliza ( Chinatown )
Hotline – 09 427666411
© 2019-2021 Your Fitster (Health & Beauty) Web Portal & Mobile App.